Iva muSamariya muSamariya!
Muvhuro, March 15, 2010 Mugovera, June 27, 2015 Bill Dawson
Spam VaSamaria havangoshandisa maakaundi maemail chete kuti vataure, asi zvakare vanobatsira mukuparadzira spam kune vamwe. Vhiki rapera vamwene vangu vaitsanangura maitirwo avakaita Yahoo! email account uye yakatamira kuGmail, nekuti yaive, "yese izere neSIPAM uye yaisakwanisa kuverengwa." Izvo zvaasina kuziva kuti maitiro aya anokuvadza Internet Service Provider (ISPs), vashambadziri uye spammers zvakafanana.
Internet Service Provider (ISPs) unoda mhinduro yekuvandudza yako email ruzivo. Pasina vashandisi kutema zvichemo nekumaka email se spam, ISPs hauna chekuchengetedza kuchengetedza vashandisi kubva mukushungurudzwa.
zhinji ISPs vari kutanga tsika yekuendesa mameseji kune iyo spam / hombe folda uye kuongorora kana vashandisi vazvigadzirisa. Pasina kupindira kwevashandisi, vatengesi veemail vanotanga kuve nenyaya dzine mukurumbira, izvo zvinokanganisa kuendesa kwavo.
Kero dzakasiyiwa dzeemail hadzina kubviswa, dzakawanda ISPs ichadzorera iyo account uye yoishandisa se spam mutezo kudzura vanotumira vanogumbura. Izvi zvinokanganisa vatengesi vepamutemo vanoramba vachitumira maemail, nekuti havazive kuti account yasiyiwa.
Vatengesi inoshandisa kuongorora kweA / B, kuvhura, kudzvanya uye kushandurwa kunatsiridza yavo meseji uye nekuvandudza mushandisi kubatikana. Kunyangwe iwe ukasarudza kuzvinyoresa kubva kumeseji yavo, vatengesi kuda, uye vanoda iwe kuti utaure.
Spammers kungoda kuti mameseji aunzwe! Ivo havana basa kana ikarova yako inbox kana iyo spam / hombe folda. Nekuregeredza kurwisa kwemashoko asingadiwe, vanowana zvavanoda. Vashandisi vanogona chete kugadzirisa nyaya nekumaka aya mameseji se spam, uye kunyevera ISPs kunhau.
Mufambiro wenyaya iyi uri kushandisa maminetsi mashoma kuongorora yakanaka uye yakaipa spam inobatsira kuita email nani kwauri nevamwe vashandisi. Usaregeredza iwo maemail kubva kune spammers kana vatengesi Nekusazvinyora, kutara email se spam, kana kubvisa email kubva kune yakawanda / spam folda, urikuvandudza ruzivo rweemail kune wese munhu.
Batsira vamwene vangu kunze, uye ita kuti email nyika ive nzvimbo iri nani… Iva spam samaritan!
Tags: Brand Kuongororacantaloupemafungumobile email statschigadzirwa chinobudirirarepinssomediaswipp ongororo
Bill Dawson kushambadza neemail uye nyanzvi yekushandisa email, kubvunza pamwe nemakambani makuru uye software sevapi vevashandisi pakubatanidzwa kwavo kweemail, usability uye kugona. Bill akashanda nemamwe emasangano makuru online, kusanganisira Zappos uye Walmart. Iye nemukadzi wake, Carla, vane yavo uye vanoshandisa yavo yega agency, 4 Imbwa Dhizaini.
Usarega Yako Drip Campaign Ive Chinese Mvura Kutambudzwa
Ndokumbira Utsanangure Indasitiri Jargon uye maAcronyms
Mar 19, 2010 pa 1: 05 PM
Kushambadzira email kwave imwe yenzira dzinoshandiswa zvakanyanya dzekushambadzira online, zvichikonzera zvakare imwe yeanonyanya kushanda kumabhizinesi. Spam yakajairika ikozvino uye icharamba ichiitika.
Izvo varidzi vebhizinesi vanofanirwa kuziva ndezvekuti spamming ichaparadza mabhureki avo munguva pfupi, ichiva ichi chisingabatsiri uye ichipa kwete zvakanyanya mhedzisiro pane neiyo opt-in rondedzero.